प्रकाशकीय : मेरो न्यूज किन ? - Meronews
प्रकाशकीय : मेरो न्यूज किन ?
मेरोन्यूज २०७७ चैत ११ गते २०:००
अनलाइनको भीडमा आजकै दिनदेखि हामी थपिन आइपुगेका छौँ । सूचना प्रविधिमा आएको छलाङले निर्णायक रुपमा हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएकै छ । मिडियाहरुको भीडमा अर्काे एउटा मिडियाका रुपमा हाम्रो प्रवेश नौलो नलाग्न सक्छ । तर यो भीडमा हामीले आफूलाई अरुभन्दा फरक देखाउन सक्छौँ / सक्दैनौँ भन्नेले हाम्रो परीक्षण हुनेछ । अरु मिडियाभन्दा मेरो न्यूज के अर्थमा फरक ? मेरो न्यूज नै किन ? यसको जवाफ हामीले हाम्रो आफ्नै कर्मबाट दिने कोसिस गर्नेछौँ ।
हामीले पस्किने सामग्री कस्ता हुन्छन् ? भन्नेले धेरै अर्थ राख्छ । त्यस अर्थमा पनि हामी सत्य–तथ्यका साथ आउन चाहेका छौँ । हाम्रो उपस्थिति स्थापित गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै हो । हाम्रो मूलभूत उद्देश्य पाठक/स्रोतालाई सत्य र तथ्य नजिक पुर्‍याउनु हुनेछ ।
पत्रकारिता सिक्दै सिकाउने पेशा पनि हो । काम गरिरहँदा गल्ती हुन सक्छन् । भूलचूक हुँदाका बखत माफी माग्ने नै छौँ । यसको व्यावसायिकतामा हामी कसैसँग सम्झौता गर्ने छैनौँ । हामी ‘भाइरल’ हुने नाममा सनसनीपूर्ण समाचारमा होइन, तथ्यमा रहेर पत्रकारिता गर्नेछौँ । यसैलाई मार्गदर्शन–मन्त्र बनाउने निधोसहित हामीले पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न विधामा काम गरेका पत्रकारको टिम जुटाउने प्रयास गरेका छौँ । भजनमण्डली बनी नकारात्मक कुराको पनि पक्षधरता लिने र विरोधको नाममा हरेक कुराको विरोध गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी खरो रुपमा उत्रिने प्रतिबद्धता आजको दिनमा गर्न चाहन्छौँ ।
समाज लोकतान्त्रिकरणको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो चरणको प्रमुख कार्यभार पारदर्शीता र जवाफदेहिता संस्थागत गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ नागरिकलाई सही सूचना दिनु र सुसूचित जनमत निर्माण गर्नु हो । यस अर्थमा हामी निषेधमा विश्वास राख्दैनौँ । खुला समाजमा बहस अनिवार्य छ । खुला बहसले कहिलेकाहीं गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । हाम्रा न्यूज पोर्टलमा हरेक खाले विचार–मतको सम्मानपूर्वक हामी स्वागत गर्नेछौँ । समानता, पहिचान र न्यायका लागि संघर्षरत वर्ग, जाति र जनजाति, क्षेत्र, महिला समुदाय आदिका मुद्दा हाम्रा प्राथमिकता हुनेछन् ।
तटस्थतामा हामी प्रश्न उठ्न दिने छैनौँ । राष्ट्रियता र राष्ट्र हितको पक्षमा ‘मिसन’कै रुपमा अविचलित भएर उभिने छौँ । हामीलाई किनारामा पुर्‍याउने या मझधारमा उभ्याउने निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईं पाठकहरुकै हुनेछ । मर्यादित, व्यावसायिक र उत्तरदायी पत्रकारिता हाम्रो मिसन हुनेछ ।
उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमलगायत कारण जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्वबाट किञ्चित विमुख हुन दिनु हुँदैन भन्ने ठानी हामी तयारीबिनै हतारमा यो क्षेत्रमा पाइला टेकेका छौँ । तर पनि हाम्रो अपर्याप्ततालाई कामकै दौरानमा पूर्णता दिँदै जाने कोसिस सदैव हुनेछ ।
हामी हाम्रो निष्ठा र प्रतिबद्धतामा कमी आउन दिने छैनौँ । पाठक नै हाम्रो प्रतिबद्धता र प्रेरणाका स्रोत हुन् । तपाईंहरु सँगसँगै सहकार्य गर्ने गरी हामी आएका छौँ । सञ्चार परिदृश्यमा नयाँ क्षितिज उघार्ने हाम्रो ध्येय छ । अब समाचार, विचार कागजमा प्रत्येक रात होइन, प्रविधि उपकरणका स्क्रिनमा प्रत्येक पल छापिने भइसकेका छन् । पाठक, स्रोता, दर्शकका नयाँ-नयाँ मागबीच समयको गति, परिवर्तित रुची र व्यवहारसँगै थप अध्ययन र नयाँ सिद्धान्त स्थापित गर्न ताजा समाचारको सदैव सम्भावना छ । त्यही नवीन सूचना, बढी ज्ञान र ताजा प्रयासको खोजी मेरो न्यूज डटकममा भइरहने छ । ‘समाचारमा आफ्नै सरोकार’ हाम्रो नारा हुनेछ । अन्त्यमा, यस सुनौलो क्षणमा सम्पूर्ण आदरणीय पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुकमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक,
कीर्तन मिडिया प्रा लि
प्रेम आलेपछि रामकुमारीको पनि राजीनामा, पत्रकार सम्मेलनबाट घोषणा गरिदै